ချစ်သူစဖြစ်တဲ့ နေ့လေးကို အမှတ်တရရှိနေတဲ့ ဇဏ်ခီ – Celebrities – Local Celebrity – Duwun
ချစ်သူစဖြစ်တဲ့ နေ့လေးကို အမှတ်တရရှိနေတဲ့ ဇဏ်ခီ
ဒီနေ့ကတော့ ရည်းစား စဖြစ်တဲ့နေ့လေးပါတဲ့။
Sabal 2018-06-12 07:56:32.0, 2018-06-12 07:56:32.0
Photo: Zenn Kyi Facebook
သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီနဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီတို့ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈ နှစ် ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ စပြီးသမီးရည်းစား စဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဇဏ်ခီဟာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Relationship ဟာ ၁၈ နှစ်ဆိုပေမယ့် ၁၈ လလောက်ဘဲ ရှိသေးတယ်လို့ ခံစားမိပြီး ဇနီးဖြစ်သူကို အရမ်းချစ်တဲ့ အကြောင်းတွေ အခုလို ရေးသား ခဲ့ပါတယ်။
&apos;&apos;လွန်ခဲ့သော ၁၈ နှစ် ဒီနေ့ June 12th မှာ သမီးရည်းစားစဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ၁၈ လ လောက်ပဲရှိသေးသလိုခံစားရပါတယ် my baby ပိစိ..
I love you and will always do. Thanks for choosing me to be your partner&apos;&apos; ဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ် မှာ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီ ၄၃ မိနစ်မှာ တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။